कोरोना परीक्षणकाे दायरा सुस्त : सबै जनताको परीक्षण गर्नुपरे कति दिन लाग्ला ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठयौन/स्वास्थ्यकोरोना परीक्षणकाे दायरा सुस्त : सबै जनताको परीक्षण गर्नुपरे कति दिन लाग्ला ?
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार ०३:२१ प्रकाशित
नेपालमा बुधबारसम्म १४ हजार ९६ जनाकाे पीसीआर विधिमार्फत काेराेना भइरस परिक्षण भएकाे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएकाे छ । १४ काे परीक्षण गर्दा ९९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकाे छ । यीमध्ये ११ जना संक्रमितले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडान प्रयोग गरेकाे खुलेकाे छ । संक्रमण पुष्टि भएकाहरूले यात्रा गरेका ८ अन्तर्राष्ट्रिय उडान र तीन आन्तरिक उडानसँग सम्बन्धित अन्य यात्रु १ हजार ४६० रहेकाे प्रहरी प्रधान कार्यालयकाे विवरणले देखाएकाे छ । यीमध्ये अझै २१७ यात्रु प्रहरीको सम्पर्कबाहिर रहेकाे बताइन्छ ।
यसबारे सामाजिक सञ्जालका प्रयाेगकर्ताहरूमा रमाइलाे बहस समेत सुरू भएकाे छ । गणितीय हिसाब निकाल्ने हाे भने यही दरमा सबै जनताकाे काेराेना भाइरस परीक्षण हुन २४६ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
सरकारकाे अहिलेकाे काेराेना परीक्षणकाे गति अनुसार लकडाउनयता प्रतिदिन औसतमा ३३३ जनाकाे काेराेना भाइरस परीक्षण भएकाे देखिन्छ । करिब ३ कराेड जनसंख्याकाे परीक्षण गर्नु परेमा ९० हजार दिन अर्था झण्डै अढाइ सय वर्ष लाग्ने एक रमाइलाे हिसाब यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूमा शेयर भइरहेकाे छ ।